Wasiirka Qorsheynta Jubbaland Aadan Aw Xirsi ayaa sheegay in aanay ka qeyb galeyn shirka Golaha Amniga Qaranka oo uu maalin ka hor ku baaqay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo. – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Wasiirka Qorsheynta Jubbaland Aadan Aw Xirsi ayaa sheegay in aanay ka qeyb galeyn shirka Golaha Amniga Qaranka oo uu maalin ka hor ku baaqay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Allhadaaftimo September 10, 2018 Uncategorized
Qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu ku sheegay in aanay ka qeyb geli doonin shirka Golaha Amniga Qaranka ee lagu xayeysiiyay Barta Twitter-ka ee Villa Somalia.
Maamulka Jubbaland ayaa soo saaray awaamiirtii u horeysay ee ku wajahan Wasiirada maamulkiisa inay gebi ahaanba hakiyaan wada shaqeyntii u dhaxeysay hey’adaha dowladda Federaalka, taasoo ka dambeysay war murtiyeedkii shirka Golaha Iskaashiga dowlad goboleedyada.
War saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha ayaa Sabtidii la soo dhaafay lagu sheegay in Madaxweynuhu uu shir wadatashi ah uu isugu yeeray Madaxda maamul goboleedyada, saacado kaddib war murtiyeedkii ka soo baxay shirkii Maamul goboleedyada ee Kismaayo, kaasoo ay ku hakiyeen wada shaqeyntii kala dhaxeysay dowladda Federaalka.
Khilaafka iyo mad-madowga siyaasadeed ee u dhaxeeyay dowladda Federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa gaaray heerkii ugu xumaa, tan iyo markii sanad ka hor la aas aasay Gole ay ku mideysan yihiin maamul goboleedyada.
Previous Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobey ayaa warbixin uu kaga hadlayo arrimaha Soomaaliya oo uu 30kii bishii siddeedaad u gudbiyey golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey,
Next Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qaadacay ka qeyb galay munaasabadii wadajirka aheyd ee furitaanka kalfadhiga 4aad ee Baarlamaanka Labada Aqal.
Xeer Ilaaliyaha Guud Ee Somaliland Oo Shaaciyey Masuuliyiinta Musuqmaasuqa Loo Haysto March 24, 2019
Xildh Dalxa oo ka hadlay taariikhda Wasiir kuxigeenka shaqada iyo shaqalaha ee aaska loo sameeyay March 24, 2019
Xildhibaan Cali Bare iyo Xildhibaano kale oo aad u dhalliilay Khudbadi M/Weyne M Biixi March 24, 2019
Xildhibaan Bulqaas “Yubbe in Ciidan la geeyo waxa ka horeeya Mamul fidin??? March 24, 2019
Xukuumadda Federalka oo maanta lagu wareejiyey xogta Macdanta Soomaaliya ku jirta iyo meelaha laga helayo March 24, 2019
Archives Select Month March 2019 (96) February 2019 (95) January 2019 (148) December 2018 (129) November 2018 (99) October 2018 (104) September 2018 (98) August 2018 (98) July 2018 (93) June 2018 (130) May 2018 (124) April 2018 (97) March 2018 (140) February 2018 (93) January 2018 (131) December 2017 (113) November 2017 (95) October 2017 (84) September 2017 (98) August 2017 (121) July 2017 (120) June 2017 (94) May 2017 (119) April 2017 (112) March 2017 (117) February 2017 (139) January 2017 (118) December 2016 (89) November 2016 (114) October 2016 (98) September 2016 (91) August 2016 (95) July 2016 (91) June 2016 (73) May 2016 (68) April 2016 (55) March 2016 (100) February 2016 (67) January 2016 (71) December 2015 (73) November 2015 (58) October 2015 (64) September 2015 (81) August 2015 (60) July 2015 (60) June 2015 (52) May 2015 (43) April 2015 (59) March 2015 (57) February 2015 (62) January 2015 (96) December 2014 (22) November 2014 (69) October 2014 (133) September 2014 (144) August 2014 (38)